Sababtoo ah awoodda dabayshu waa mid aan xasilloonayn, soo-saaraha korontada dabayshu waa 13-25V beddelidda hadda, taas oo ay tahay inuu saxaa xeedho, ka dibna batteriga kaydinta ayaa la dallacaa, si tamarta korontada ee soo saarta korontada dabayshu u noqoto kiimiko tamar. Kadib isticmaal rogaal celis ...
Mabaadiida Awoodda Dabaysha
U beddelidda tamarta kinetka ee dabaysha tamarta kinetic farsamaysan, ka dibna u beddelaysa tamarta farsamada tamarta kinetic korontada, tani waa dhalinta awoodda dabaysha. Mabda'a dhalinta tamarta dabaysha ayaa ah in dabaysha loo adeegsado in lagu kaxeeyo baalasha dabaysha si ay u wareegto, ka dibna loo kordhiyo ...
Shaqada marawaxadda dabaysha
Dad badan ayaa isweydiiya waa maxay shaqada marawaxadaha dabaysha + kontoroolaha. Dhab ahaantii, labadan qaybood waxay samaystaan ​​nidaam dhalinta tamarta dabaysha oo deggan oo caqli badan, kaas oo si buuxda u isticmaali kara tamarta dabaysha si ay u dhaliso koronto. Qalabku si hufan ayuu tamarta dabayshu ugu beddeli karaa tamar koronto. Dagaalka ...
Nalalka waddada isku-jira ee dabaysha-cadceedda
Sababtoo ah mararka qaarkood cimilada noloshu way ka duwan tahay, cimiladu way is beddeshaa sida ay isu beddesho, xilliyo kala duwanna, isbeddelka cimiladu sidoo kale wuu kala duwan yahay. Si loogu oggolaado in si caadi ah loo isticmaalo, marmarka qaarkood waa inaan tixgelinnaa qaar ka mid ah saamaynta cimilada iyo cimilada. Haddii cimiladu saamayn doonto t ...
Halista iyo ka -hortagga mashaariicda tamarta dabaysha ee caalamiga ah
Wararka Shabakadda Awoodda Dabaysha: Hindisaha “Suunka iyo Wadada” ayaa ka helay jawaabo togan waddammada jidka mara. Maaddaama uu yahay soosaaraha ugu weyn uguna macaamilka tamarta la cusboonaysiin karo, Shiinaha ayaa si isa soo taraysa uga qayb qaadanaya iskaashiga awoodda tamarta dabaysha ee caalamiga ah. Shiine ...
Dulmarka Kooxda Xaqiijinta Gear ee Dabaysha
Gudbinta Gear waa habka ugu muhiimsan ee lagu gudbiyo dhaqdhaqaaqa iyo awoodda sanduuqyada awoodda dabaysha. Wax -qabadkeeda shaqo, qaadista awoodda, nolosha adeegga iyo saxnaanta shaqadu waxay si dhow ula xiriiraan tayada gudbinta qalabka. Tayada gudbinta ee gudbinta qalabka ayaa inta badan ku tiirsan ...
Maxay ugu kharash badan tahay dad badan oo reer miyi ah inay qaataan marawaxadaha dabaysha?
Hadda oo leh horumarka joogtada ah ee waqtiyada, horumarinta meelaha miyiga ah ayaa iyaduna aad u degdeg badan. Tusaale ahaan, haddii dad badan oo ku nool meelaha miyiga ah ay rabaan inay isticmaalkooda ka dhigaan mid ku habboon, badankoodu waxay sidoo kale isticmaali doonaan marawaxadaha dabaysha sababta oo ah Mid ka mid ah adeegsiga ayaa kaa dhigi kara mid kharash badan ...
Cilmi -baaris ku Saabsan Ogaanshaha Cilladda iyo La -socodka Caafimaadka ee Qalabka Awoodda Dabaysha
Wararka Shabakadda Awoodda Dabaysha: Soo -koob: Waraaqdani waxay dib -u -eegis ku samaynaysaa xaaladda hadda jirta ee horumarinta ogaanshaha cilladda iyo la -socodka caafimaadka ee saddexda qaybood ee ugu waaweyn silsiladda wadidda marawaxadda dabaysha - baaldiyo isku jira, sanduuqyo, iyo matoorro, waxayna soo koobaysaa xaaladda cilmi -baarista ee hadda iyo aspec ...
Codsiga beerta dabaysha ayaa loo qoondeeyay albaabka xogta waqtiga-dhabta ah ee helitaanka internetka warshadaha
Hawlgalka iyo maareynta beeraha dabaysha waa inay u hoggaansamaan shuruudaha Maamulka Tamarta Qaranka iyo Shabakadda Gobolka ee badbaadada shabakadaha wax soo saarka korontada. Muuqaalka ugu weyn ayaa ah in shabakadda maareynta wax soo saarka ee beerta dabaysha ay u qaybsan tahay saddex aag nabadgelyo accordi ...
Teknoolojiyadda ku xiran shabakadda DC ee dabacsan ayaa caawisa awoodda dabaysha badda si ay ugu dhaqaaqdo dhinaca biyaha qoto dheer iyo badda furan
Wararka Shabakadda Awoodda Dabaysha: Xalka la doorbiday ee isku -xidhka shabakadda la isku hallayn karo ee awoodda dabaysha badda. Jidadka farsamo ee caadiga ah ee isku xirka shabakadda korontada dabaysha waxaa ka mid ah gudbinta AC ee caadiga ah, gudbinta AC-ku-yar, iyo gudbinta DC ee dabacsan. dalkii ugu horeeyey ee dalkeyga ...
Shuruudaha iyo tilmaamaha loogu talagalay raacitaanka korantada sare iyada oo loo marayo tiknoolajiyada marawaxadaha dabaysha ee gudaha iyo dibaddaba
Wararka Shabakada Awoodda Dabaysha: Iyada oo si xawli ah loo horumarinayo tikniyoolajiyadda gudbinta DC, nabadgelyadeeda, xasilloonideeda, iyo hawlgalkeeda ayaa wajahaya caqabado waaweyn, gaar ahaan iska -caabbinta korantada sare ee unugyada tamarta cusub ee agagaarka gudbinta DC waxay noqotay diiradda. Si loo hagaajiyo ...
Qabanqaabiyaha Hook Furaha, Hanjabaadda Dheriga Dhirta, Farshaxanka Darbiga Birta, Qaansarka Warshada Darbiga, Qabatooyinka Furaha Furaha, Muujiyaha Haysta Luqunta,